यी हुन् दक्षिण भारतीय फिल्मका महँगा कमेडियनहरु – Khabar Silo
यी हुन् दक्षिण भारतीय फिल्मका महँगा कमेडियनहरु
एजेन्सी । फिल्ममा कमेडियनको भुमिकाले धेरै अर्थ राख्छ । यही कारणले हरेक फिल्ममा कोही न कोही कमेडियन भएकै हुन्छन् । बलिउडमा जस्तै साउथ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि केही कमेडियन धेरै नै लोकप्रिय छन् ।
यीमध्ये ब्रम्हानन्दम सबैभन्दा चिनिएको अनुहार हो । अहिलेसम्म उनले १ हजार भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । उनले प्रतिदिन ३ लाख भारतिय रुपैया चार्ज गर्छन् ।बम्हानन्दमबाहेक साउथमा अन्य धेरै कमेडियनहरु छन् जसले राम्रो पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । यस्ता छ साउथका लोकप्रिय कमेडियनको पारिश्रमिक रेट
अहिले सम्म १००० भन्दा बढि फिल्ममा काम गरिसकेका ब्रम्हानन्दमले प्रतिदिन ३ लाखभारु पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
साउथकाअर्का लोकप्रिय कमेडियन अलीबाशाले प्रतिदिन २ लाख रुपैंया चार्ज गर्छन् ।
खास नाम बैंकट प्रभु प्रसाद रहेका सप्तगिरीले प्रतिदिन डेढ लाखभारु पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । उनलाई साउथका मिनी ब्रम्हानन्दम पनि भनिन्छ ।
४. पोसानी कृष्णा
पोसानी कृष्णा मुरली अभिनेताको साथमा लेखक र निर्देशक पनि हुन् । उनले १५० भन्दा बढि फिल्म पनि लेखेका छन् । उनले साउथ फिल्ममा कमेडियनको रोल गरेबापत प्रतिदिन डेढ लाखभारु लिन्छन् ।
५. रघु बाबु
तेलगु फिल्मका चिरपरिचित कमेडियन रघु बाबुले प्रतिदिन एक लाखभारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
६. थगुबोथु रमेश
थगुबोथुको असलीनाम रमेश रामिल्लाहो तर उनलाई धेरैले उनको फिल्मी नामले चिन्छन् । उनले धेरै जसो फिल्ममा जड्ँयाहाको रोलमा काम गर्छन् । उनले पनि एक दिनको एक लाखभारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
कृष्णाको असली नाम पापा राव चौधरी हो । उनले पनि ३ सय पचास भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । उनले पनि एक दिनको एक लाखभारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
८. भेनेल्ला किशोर
वास्तविक नाम बोकल्ला किशोर कुमार भएका उनले एक दिनको ५० हजार भारु लिने गरेका छन् ।
९. श्रीनिवास रेड्डी
तेलगु कमेडियन श्री निवास रेड्डीले दिनको ५० हजार पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
फ्लपको यात्रा पनि थाकिनन् केकी!
फिल्म ‘स्वर’बाट ठूलो पर्दाको यात्रामा हिडेकी केकी अधिकारी अभिनयमा अब्बल अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छिन्। नेपाली फिल्म उद्योगमा केकीलाई बौद्धिक अभिनेत्रीको रूपमा व्याख्या गर्ने पनि छन्। करियरको प्रारम्भिक चरणबाट नै केकीलाई फिल्मको कुनै खाँचो भएन। तर, अफसोच! उनी कहिलै हिट पनि हुन सकिनन्। एक पछि अर्को फिल्ममा केकीले अभिनय गरिरहँदा नेपाली फिल्म बजारमा उनको चर्चा चुलिनु कुनै […]
राजेश र करिष्मा एउटै भिडियोमा
काठमाडौं । नायक राजेश हमाल र नायिका करिष्मा मानन्धर एउटै गीतमा देखिएका छन् । ‘चट्ट बसम् देउरालीमा’ बोलको गीतमा नायक हमाल र करिष्माले अभिनय गरेका हुन् । मेलिना राई र भीम चापागाईंको स्वर रहेको गीतको शब्द तथा संगीत दीपक शर्माको छ ।उत्सव दाहालले खिचेको भिडियो अच्युत बजगाईंले सम्पादन गरेका छन् । देवेन्द्र पाण्डेले भिडियो निर्देशन […]
दुर्गेसको ‘बीच्च बीच्चमा’मा विवादमा, शब्द चोरीको आरोप
गत वर्ष ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच्चबीच्चमा’ नामक तीज गीत ल्याएर चर्चामा आएका गायक दुर्गेश थापा पछि ‘ह्याप्पी तिहार’ भन्दै झन् चर्चामा आए । गीतमा प्रयोग भएको शब्दमा आपत्ती जनाउँदै उनीमाथि उजुरी नै पर्यो । यस वर्ष पनि उनले तीजलाई लक्षित गरी नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । आफ्नै युटुब च्यानलबाट ‘लोक पपशैली’मा ‘एउटा फोटो खिच’ […]
रानु मन्डलले रूवाइन् हिमेश रेशमियालाई
नेपाल-मलेसिया श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सहमति, अब शून्य लागतमा जान पाइने